CHRR Alaotra Mangoro: vita ny toeram-pitsaboana ho an’ny reny | NewsMada
CHRR Alaotra Mangoro: vita ny toeram-pitsaboana ho an’ny reny
Notokanana ny asabotsy teo ny sampan-draharaha misahana ny reny sy ny zaza manokana ao amin’ny hopitaly CHRR Alaotra Mangoro. Mamaly ny filan’ny mponina ao Ambatondrazaka sy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro manontolo ny fisian’ity sampan-draharaha manokana miahy ny reny sy ny zaza ity.
Niaraka tamin’ny fampitaovana toy ny fandriana 22, fitaovam-pandidiana sy kojakojam-pitsaboana maro ary fitaovam-pitarafana, ity fotodrafitrasa vaovao ity. Teo koa ny kojakoja ho an’ny mpiteraka, lay misy odimoka, fanafody… Ankoatra ireo ny fiara tsy mataho-dalana natao hitondrana marary, indrindra ireo any amin’ny toerana saro-dalana.
Ahitana ny sampana ho fitsaboana ny zaza manokana sy toeram-piterahan’ny reny ary toeram-pandidiana izany sampan-draharaha vaovao izany. Laharam-pahamehana ho an’ny fanjakana ny fahasalamam-bahoaka. Manampy ny mponina ny fisian’ny fotrodraitrasa ara-pahasalamana toy izao. Tanjona ny hampihena ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza.
Misedra olana ireo reny hiteraka teo aloha, saingy mivaha izany ankehitriny ary arifomba ny fitaoam-piterahana. Manana ny dokotera manam-pahaizana amin’ny fitsaboana zaza ihany koa ny hopitaly amn’izao fotoana.
Nanentana ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny dokotera ihany koa ny fanjakana hanao ny asany antsakany sy andavany ary hampiroborobo ny tontolon’ny fahasalamana.
Nanentana ny mponina hanaja ny fotodrafitrasa iombonana ny tompon’andraiki-panjakana.
Natolotra tamin’izany koa ny fitaovana ho an’ireo mpiandraikitra ny fandriampahalemana any an-toerana. Nahitana moto 15 ireo fanomezana natolotra ireo. Nahazo ny anjarany koa ny CEG sy ny EPP….